June 9, 2017 Ram Kumar अन्तरबार्ता
प्रेमला राई उपमेयर उम्मेदवार , पथरीशनिश्चरे नगरपालिका
प्रेमला राई , मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उपमेयरकी उम्मेद्वार हुन् । कांग्रेसका पूर्वजिल्ला सदस्य नन्दराम राईकी छोरी भएर मात्र होइन , उनको अघिल्लो तीन पुस्ताले कांग्रेसको झण्डा बोकर न्याय र स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गरिसकेको इतिहास पनि उनीसँगै छ । सुकुम्वासी समस्या र गरिबीबाट आक्रान्त पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको मुहार फेर्ने आँट र साहस बोकेर जन–जनको दैलोमा पुगिरहेको बताउने राईले आईएसम्मको अध्ययन गरेकी छिन् । उपमेयर बन्नका लागि कस्ता कार्यक्रम लिएर घरदैलो गरिरहेकी छिन् भन्ने विषयमा राईसँग हाम्रा सहकर्मी हरि कोइरालाले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
कांग्रेस ठूलो पार्टी हो । लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको रक्षक । बीस वर्ष यता स्थानीय निर्वाचन भएको छैन । कार्यकर्ता हरेक वर्ष बढेको बढ्यै छन् । यो लामो ‘ग्याप’ ले धेरै कार्यकर्ता आकांक्षी हुन् स्वाभाविकै हो । राजनीतिमा कोही जोगी बन्न लागेका हुँदैनन् । प्रतिस्पर्धाका बीच पनि हामी कहाँ सहमति र सहकार्य कै आधारमा उम्मेद्वार चयन भएको छ । सुरुमा पार्टीमा सामान्य अन्तर बिरोध देखिए पनि अब हामी एक जुट भएर लागेका छौँ ।
विपक्षीदलका साथीहरुले जनतालाई धेरै अघिदेखि यहाँका समस्या र विकासे कामको उधारो सपना बाँढेर आफूले नाफा गरेका छन् अब म त्यसो हुन दिन्न । मैले चुनाव जित्नासाथ पहिलो नम्बरमा राज्यको पहुँच नपुगे कै कारण नागरिकताबाट बञ्चित नगरबासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको नागरिकता बनाईदिने अभियान सञ्चालन गर्छु । आज पनि मत माग्न जाँदा सयौंले मलाई नागरिकता छैन, भनिरहेका छन् । छोराको नागरिकता छ, आमाको छैन, श्रीमानको छ, श्रीमतीको छैन । बंशजको नागरिकता भएकाले पनि नागरिकता नभए कै कारण राज्यले दिने वृद्धभत्ता, औषधि उपचारमा छुट लिन सकेका छैनन् । मतदान गर्ने अधिकारबाट बञ्चित छन् । वृद्ध बाआमाका लागि वृद्ध चौतारीको निर्माण गर्नेछु । ताकि उनीहरू त्यहाँ गएर समय काट्न सकुन् । बक्राहा खोला पूर्व नगरको एउटा गाउँ छ । त्यो गाउँका बालबालिका वर्षयाममा स्कुल आउन पाउँदैनन् । त्यस कारण तत्काल झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने छु । नगरका अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी र जनजातिहरूका लागि सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने छु । अब मान्छेलाई खानका लागि एक छाक रोटी होइन, जीवन भर बाँच्नका लागि हातमा सीप चाहिएको छ ।
नगरपालिका कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने विषय टुङ्गोमा पुगेको छैन । अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ । त्यसलाई किनार लगाएर भवन निर्माणको पहल सुरु गरिने छ । नगरपालिकामा आजसम्म एउटा दमकल छैन । तुरुन्त दमकलको ब्यवस्था गर्नेछौँ । अर्को समस्या फोहोर डम्पिङको हो । फोहोर ब्यवस्थापनका नाममा वर्सेनी लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । पूर्व–पश्चिम सडक किनारमा फोहोर फ्याकिएको छ । फोहोर ब्यवस्थापन समितिले काम नगर्दा शहरको फोहोर उठ्न सक्दैन । ब्यवस्थित डम्पिङसाइटको निर्माणका लागि साझेदार संस्था खोजी गरी फोहोर ब्यवस्थापन स्थायी रुपमा गरिने छ । खानेपानीको पहुँच नपुगेको स्थानमा खानेपानी विस्तार गरिने छ । बक्राहाले सुन्दरी चौक र हसन्दहका पूर्वी गाउँमा बर्सेनी वितण्डा मच्चाएको छ । त्यसको स्थायी समाधानका लागि अविलम्ब काम गरिने छ । नदी कटान रोक्न तात्कालिन र दीर्घकालिन कार्यक्रमको आवश्यक छ । पथरी ठूलो शहर बनिसक्यो, मूख्य बजार र सहायक बजारमा ढल ब्यवस्थापन नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । ढलको प्रबन्ध गरी पथरीलाई डुवान मुक्त शहर बनाइने छ । पथरी, शनिश्चर र हसन्दहको मुख्य बजारका सडक अझै कालोपत्रे हुन सकेका छैनन् । तिनलाई तत्काल कालोपत्रे गरिने छ ।
० पथरीशनिश्चरे नगरपालिका त एमालेको ‘गढ’ भन्छन् नि ? यस्तो ठाउँमा चुनाव जित्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
गढ , पकेट क्षेत्र भनेको स्थायी रुपमा रहने विषय होइन । नगरबासीलाई कसैले डामेर छाडेका साढे नसम्झिए हुन्छ । यस अघिका स्थानीय चुनावमा एमालेले जित्दैमा उसको गढ मान्नु हुन्न । हो, मैले सुनेको छु, लालपुर्जा नभएका गरीबहरूले गरीबकै पार्टीमा मतदान गर्नु पर्छ भनेर एमाले, एमाओवादी साथीहरूले भोट मागेको । त्यसो हो भने यहाँका बासिन्दालाई भोटका लागि जहिल्यै गरीब बनाई राख्ने हो ? मैले साथीहरूसँग भनेको छु । गरिबीबाट माथि उठ्न कांग्रेसलाई भोट हाल्नुहोस् । कांग्रेस गरीबको मित्र हो गरिबीको शत्रु हो । संविधानसभा २०६४ मा एमाओवादी जित्यो । २०७० एमालेले जित्यों, नेता त हामी कहाँ स्थिर छैनन्, मतदाता कसैका पेवा हुने कुरै भएन । एमालेको माछा हुँदा दुलो भित्र हात, सर्प हुँदा दूलो बाहिर हात प्रवृति नगरबासीले बुझिसेकेका छन् । नगरवासी कसैको खल्तीमा राखेको सुपारीका टुक्रा होइनन्, ता कि चाहेको बेला निकालेर कुटुक्क पार्न पाइयोस् । जिताउने जिम्मा पार्टीको हातमा छैन । कुल मतदाताको २० प्रतिशत विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता होलान्, बाँकी त स्वतन्त्र ब्यक्ति छन् । जनताले अब भरोसा खोजेका छन् । त्यो हामी दिन सक्छौं भन्ने मेरो दावी हो । २० वर्षपछि चुनाव हुन लागेको छ । २०५४ मा जन्मिएको बच्चा आज मतदाताको रुपमा भोट हाल्न आतुर छ । उसले विगत भन्दा पनि भविष्य कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने सोचिरहेको छ । ती युवाहरू कांग्रेसको पक्षमा मतदान गर्न पर्खिरहेका छन् भन्ने कुरा अहिलेको जनलहरले देखाइरहेको छ ।